नेपालीका लागि अमेरिकी भिषा नीति परिवर्तन हुन लागेकाे हाे? - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
नेपालीका लागि अमेरिकी भिषा नीति परिवर्तन हुन लागेकाे हाे?
अमेरिकी नागरिकलाई पाँच वर्षे भिषा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा
दीपक खरेल काठमाडौं कार्तिक १९
नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकमध्ये अमेरिकी पर्यटकको संख्या भारत र चीनपछि तेस्रो ठूलो छ।
गृह मन्त्रालयमा १ चैत २०७४ मा भएको भेटमा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अलाइन टेप्लिजले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सँग अमेरिकी नागरिकका लागि नेपाली भिषा शुल्क महँगो भएको गुनासो गरिन्।
मन्त्री भएको एक महिना पूरा नगरेका गृहमन्त्री थापाका लागि राजदूत टेप्लिजले सुनाएकाे तथ्य नयाँ र अनाैठाे थियाे। उनले भिषा नीति समीक्षा गर्न अाग्रह गरेकी थिइन्।
राजदूतको आग्रहपछि गृहमन्त्री थापाले तत्कालै अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दिपक काफ्लेसँग छलफल गरे। अमेरिका र नेपालबीच तीन प्रकारका भिषामा समानता रहेको र पर्यटकीय भिषा पारस्परिक बनाउन अध्ययन भइरहेको उनले मन्त्रीलाई जानकारी दिए।
गृहमन्त्री थापासँग कुराकानी गर्दै तत्कालीन अमेरिकी राजदूत टेप्लिज
सो छलफलको करिब ७ महिनापछि अमेरिका र नेपालबीच पर्यटक भिषा पारिस्परिक गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। यो प्रस्ताव पारित भएसँगै नेपाल आउने अमेरिकी पर्यटकले भिषाका लागि तिर्नुपर्ने पैसा तुलनात्मक रूपमा कम हुनेछ। उनीहरुले एकै पटकमा पाँच वर्षको भिषा पाउनेछन्।
‘गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यका कारणले सो प्रस्तावमा छलफल हुन सकेन’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ।’
प्रस्तावमा के छ ?
मन्त्रिपरिषद् पुगेको प्रस्तावमा पर्यटकीय भिषा पारस्परिक गर्ने विषय समावेश छ। नेपाल आउने अमेरिकी पर्यटकलाई विशेष अवस्थामा बाहेक फिर्ता नगर्ने र आगमन भिषा लिइसकेपछि इच्छाअनुसार पाँच वर्षे भिषा लिन सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। यसरी पाँच वर्षे भिषा लिने अमेरिकी नागरिक एक वर्षमा १ सय ८० दिनसम्म नेपालमा बस्न पाउनेछ।
नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकमध्ये अमेरिकी पर्यटकको संख्या भारत र चीनपछि तेस्रो ठूलो छ। खुला सीमा र एेतिहासिक सम्बन्धका कारण भारतीय नागरिकलार्इ नेपाल प्रवेशमा भिषा लाग्दैन। सन् २०१५ देखि चिनियाँ नागरिकका लागि भिषा निःशुल्क गरिएकाे छ। यद्यपि चीनले नेपालीलार्इ भिषा शुल्क लिने गर्छ।
अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा अमेरिकबाट ७९ हजार १ सय ४६ पर्यटक नेपाल घुमफिरका लागि आएका थिए। अमेरिकाको भ्रमण भिषा पाउने नेपालीको संख्या भने यसको तुलनामा सारै थोरै छ। त्यो सरदर १ हजार ५ सय हाराहारी मात्र छ।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकासँग भिषा नीति कसरी पारिस्परिक हुनसक्छ?
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेल भन्छन्, ‘लामो अध्ययनपछि भिषा पारस्परिकको विषयमा हामी निष्कर्षमा पुगेका हौं। दुवै देशको हितमा रहने विषय त्यसमा समावेश भएका छन्।’ सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्यलार्इ पूरा गर्न यो नीति सहयोगी हुने उनले बताए।
भिषा नलागे फिर्ता हुन्छ शुल्क?
२३ पुष २०७४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले अमेरिकासँग विद्यार्थी, पत्रकार र कामदारका लागि भिषा पारस्परिक नीति लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयअनुसार नेपालको अध्यागमनले यी तीन किसिमका भिषामा नियम परिवर्तन गरेको छ। अहिले अमेरिकी विद्यार्थीले ३ सय ६०, कामदारले १ सय ९० र पत्रकारले १ सय ६० डलरमा नेपाली भिषा प्राप्त गरिरहेका छन्।
यी तीन थरि भिषा पारस्परिकको सम्झौता काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले लागू नगरेको गुनासो विभागमा पुगेको छ। यो विषयलाई समेत प्रस्तावमा समेटिएको महानिर्देशक पौडेल बताउँछन्।
हाल भ्रमण भिषा आवेदनका समयमा अमेरिकी दूतावासले १६० डलर शुल्क असुल्ने गर्छ। भिषा अस्वीकृत भए पनि सो रकम फिर्ता हुँदैन। नेपालले भिषा आवेदक अमेरिकी नागरिकलाई सतप्रतिशत भिषा दिँदै आएको छ। आवदेन शुल्क बापत लिने अग्रिम रकम फिर्ताको विषय समेत नयाँ प्रस्तावमा परेको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए। त्याे विषय के हाे भन्ने उनले खुलाएनन्।
विदेशी नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्दा मात्र पर्यटक भिषा दिने र त्यस बापत मात्र शुल्क तिर्नु पर्नेछ। प्रस्ताव पारित भएसँगै पारस्पिरिकताकाे अाधारमा अमेरिकाले समेत यही नियम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।
वर्तमान व्यवस्थाअनुसार नेपालमा पर्यटकको रुपमा आउने विदेशी नागरिकले भिषा शुल्कबापत १५ दिनका लागि २५ डलर, ३० दिनका लागि ४० डलर, ९० दिनका लागि १०० डलर शुल्क तिर्छन्। यदि ९० दिन भन्दा बढी बस्न चाहेमा दिनको २ डलर रुपैयाँ थप बुझाउनुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाले भने १ सय ६० डलरमा ५ वर्षका लागि बहुप्रवेसी भिषा प्रदान दिन्छ। अमेरिकामा विदेशी नागरिकले १ वर्षमा ६ महिनासम्म बस्न पाउँछन्।
याे पनि: नेपालकाे भिषा शुल्क समीक्षा गर्न अमेरिकी राजदूतकाे अाग्रह
प्रकाशित १९ कार्तिक २०७५, सोमबार | 2018-11-05 12:51:37